सञ्चारविज्ञ उम्मेदवार भुपालमान थापाको संकल्प: सञ्चारक्षेत्रको सुद्धिकरण ::ePublickhabar.com
सञ्चारविज्ञ उम्मेदवार भुपालमान थापाको संकल्प: सञ्चारक्षेत्रको सुद्धिकरण
Posted on बिहीबार, ७ मंसिर, २०७४ by ebublickhabar
नेपाली राजनीतिमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत बिशेषज्ञ व्यक्तित्वहरुलाई समेत राज्यको मुल धारमा ल्याउने अभ्यास सुरु भएका छन् । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन अन्र्तगत पहिलो पटक हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मार्फत राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर पनि राष्ट्रलाई योगदान दिएकाहरुलाई सम्मान स्वरुप माननीय पगरी दिलाउन खोजीएका छन् । तर नगन्य छ । निष्टाको राजनीति गर्दै आएको दावी गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यस्तै सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ भुपालमान थापालाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवार बनाएको छ । के छन त सञचारविज्ञ थापासंग सांसद भएर काम गर्ने एजेण्डा ? रघुनाथ बजगाँईले लिएको अन्र्तवार्ता :
मनानीय हुने तपाँईको आकांक्षा के का लागि ?
माननिय हुने आकांक्षा भन्दा पनि यो मेरा लागि पार्टीले गरेको सम्मान हो भन्ने बुझेको छु । जिवनको उर्जाशिल समय यहि सञ्चार कर्ममै वित्यो । अहिले पनि म कुनै युवक भन्दा कम छैन् । तर अब एक पटक नितिगत तहमा रहेर काम गर्नुपर्यो भन्ने प्रस्तावलाई स्विकार गरेको हुँ । पार्टीका झण्डा बोकेर लामो समयदेखि पार्टीलाई योगदान गर्नेहरु धेरै हुँदाहुँदैपनि नेमकिपाले तिनलाई त्याग गरेर मलाई अगाडी सारेको छ । यो मेरा लागि आवशर र चुनौती दुबै हो ।
सांसद भए भने मेरा मुख्य प्राथमिकता यो हो भन्ने त होला नी !
करिव ४० बर्ष पत्रकारिता गरेर बिताइयो । यो बिचमा समाजका राम्रा नराम्रा धेरै पक्षलाई नजिकबाट अनुभुत गर्ने अवशर मिल्यो । आफ्नै पेशागत मर्यादामा रहेर सकारात्मक परिवर्तन गर्ने कोसीसहरु पनि गरियो । कति सफल भए कति असफल भए । तर राज्यलाई कुन दिशामा अगाडी बढाउने भन्ने राजनीनिक नेतृत्वको काम गराईमै भर पर्दो रहेछ ।
त्यसलाई खबरदारी गरेर सहि बाटोमा हिँड्न उत्प्रेरित गर्नेहरु पनि कतिपय अवस्थामा ओझेलमा पर्दा रहेछन् । जहाँसंम्म सांसद भए के गर्नुहुन्छ तत भन्ने तपाँईको प्रश्न छ, हेर्नुस मेरो ठुला सपना छैनन् । ‘मेरो प्राथमिकता भनेका, भ्रष्टाचार उन्मुलन, शोशितपिडीतको समुचित संरक्षण र सम्मान, न्याय प्रशासन, सञ्चारक्षेत्रको सुदृढिकरण र सुद्धिकरण तथा श्रमको उचित सम्मान नै हो ।’ मतदाताले आश्वसनका पोका मात्रै नभएर कार्यन्वयनका आधार खोजेका छन नी हेईन ? हो, मतदाता धेरै शिक्षित र जिम्मेवार भैसकेका छन् । कसले भनेको सहि हो र गलत छुट्ट्याउन सक्छन् । अब भाषण नभएर काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरुमा पनि चेत आएका हल्लाहरु गरिएका छन् । तर नेपाली राजनीति अझै अन्योलमै छ । धमिलो वातावरणमै रुमल्लिरहेको छ ।
अन्योलपुर्ण राजनीतिको मुख्य जड के हो त ?
पहिलो नेपाल राजनीतिक रुपमा पनि आत्मनिर्भर छैन् । सानो भन्दा सानो निर्णय छिमेकीको सल्लाहनिा गरिँदैन । अर्काको उदेश्य अनुरुप चल्नेहरुले कसरी नेपाली राजनीतिलाई संङ्ल्याउन सक्छन त ? आशा गर्नु पनि बेकार छ । देश र माटोसंग खेलवाड गर्नेहरुको हातमा नेपालको भविश्य सुम्पिएर समृद्ध नेपालका कल्पना कसरी गर्ने ? देश रहे हामी रहन्छौँ भन्ने सम्म बुझेका छैनन् कतिपयले । छिमेकीको हेपाहा प्रवृति रोक्नु सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो हाम्रो देशको । समान हैसियतका कुरा गर्ने हिम्मत समेत राख्दैनन नेपाली नेताहरु अनि कसरी कुटनीतिक कुशलता देखिन्छ । यावत समस्याहरु छन जसले ईतिहासमै नेपाल आफैँमा सार्वभोम-स्वतन्त्र भएर पनि अर्धऔपनिवेशको अवस्थामा छ ।
छिमेकीलाई मात्रै गाली गरेर हुन्न की ! आफैँमा पनि समस्या होलान ?
छिमेकीलाई गाली होईन हाम्रा नेताहरु लम्पसार बने भन्ने चाहीँ हो । हामीमा समस्यै नभएको होईन, धेरै छन नी । काममा असमानता हटेको छैन् । श्रम अनुसारको परिश्रम पाईँदैन, दिइँदैन । यतैतिर सोझीऔँ न, श्रम अनुसारको मुल्य नपाउने को को यहाँ ? कसले पाएको छ र ? श्रम अनुसारको खेती, खेती अनुसारको मुल्य पाउनुपर्यो । पत्रकारका दुखै हेर्नुस उस्तै छन् । न्युनतम दुई छाक जोर्न मुस्किल हुने तलब पाउन लडाईँ गर्नुपर्छ । किसानका दर्द उस्तै छन् । मावअधिकारको प्रत्याभुती दिलाउन सकिएको छैन । नागरिकहरु आधारभुत स्वास्थ्य उपचार नपाएर मृत्युको सिकार बन्छन् । दिनभर काम गर्यो बेलुका मालीकको खप्की खानुपर्ने मजदुरका पिडा कसले सुनिदिने ?
प्रश्न माथी प्रश्न नभएर नीतिगत सुधारका लागि माननीय हुन खोज्दैहुनुहुन्छ अब त ?
हो, मेरो ४० बर्षको पत्रकारिता कर्मका दौरानमा देखेका, भोगेका बिषयलाई सहि रुपमा उठाउने र संवोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु । पठाउने की नपठाउने त मतदाताहरुकै हातमा छ हैन र !
को हुन भुपाल थापा ?
२०१० सालमा धनकुटाको तत्कालिन फलाँटे गाउँविकास समिति वडा नम्बर १, (हाल पाख्रिवास नगरपालिका) मा जन्मेका हुन । सानैदेखि थिचोमिचो र कसैले हेपेको सहन नसक्ने स्वभावका थापाले १९ बर्षको उमेरमा मोरङ्बाट एसएलसी पास गरे । एसएलसी पास गरेर उच्च शिक्षाका लागि झापा पुगेका थापाले भद्रपुरबाट मानविकिशास्त्रमा उच्च माध्यमिक शिक्षा पास गरे । त्यसपछि काठमाडौँ छिरेका थापाले मानविकिबाटै रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट स्नताक पुरा गरि औपचारिक शिक्षालाई पुर्णविराम लगाए । त्यसपछि लगातार पत्रकारतिा कर्ममै रहेका थापाले अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दल, तिनका भातृसंगठन कसैको पनि सदस्यता लिएका छैनन् । थापाको सुचना विभागको काड नम्बर नै ११२ रहेको छ । पत्रकारितामार्फ देश र राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएको भन्दै बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संघसंस्थाले उनलाई पुरस्किृत पनि गरेका छन् । शसत्र प्रहरी, भु–संरक्षण तथा वनस्पपित विभाग, इन्सेक जस्ता संस्थाले उनलाई कदरपत्र सहित सम्मान गरेका छन् ।
थापाको पत्रकारिता थापाको पत्रकारिता २०३२ सालबाट औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो । सववेचना शाप्ताहिकबाट पत्रकारिता सुरु गरेका थापाले २०३६ सालमा आफैँले बिम्बप्रतिबिम्ब शाप्ताहिक सुरु गरे । बजारको माग बढ्दै गएपछि बिम्बप्रतिबिम्ब शाप्ताहिक २०३९ सालबाट दैनिक प्रकाशन हुन थाल्यो । पछिल्लो समय भने फेरी शाप्ताहिक रुपमा नियमित प्रकाशन हुँदै आएको छ ।
२०५७ साल देखि शाप्ताहिक रुपमा नेपाल टेलिभिजनमा बिम्बप्रतिबिम्ब नामक कार्यक्रम स१चालन गर्दै आएका छन् । समसामयिक बिषयमा खोजमुलनजुन सामाग्रीहरु समावेश हुने कार्यक्रम बिम्बप्रतिविम्ब अहिलेको पनि एक लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम हो ।